Cashuur iyo caddaynta dakhliga | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / Cashuur iyo caddaynta dakhliga
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay cashuurta iyo caddaynta dakhliga. Lacagaha aad u bixiso cashuur ahaan waxaa hesha dawladda si ay dawladdu u bixiso waxyaabo ay ka mid yihiin kaalmada carruurta, kaalmada kirada iyo gunnada bukaanka. Lacagaha cashuuraha waxaa xitaa laga bixiyaa iskoolada, daryeelka bukaanka, booliiska iyo maktabadaha.
Qoraalkan waxaad ka akhrin doontaa sida nidaamka cashuurta ee Iswiidhishka u shaqeeyo. Waxaad xitaa akhrin doontaa wixii ku saabsan caddaynta dakhliga iyo sida aad u sameynayso caddaynta dakhliga.
Waa maxay cashuur?
Canshuurtu waa kharash loogu talogalay in lagu bixiyo kharashyada dawladeed. Inagu waxaynu cashuur ka bixinaa dakhligeena, iyo alaabta iyo adeegyada.
Cashuurtu waxay dakhli weyn oo muhiim ah u tahay dal. Gudaha Iswiidhan waxaa lacagahan loo isticmaalaa daryeelka bukaanka, iskoolka, jidadka, gaadiidka dadweynaha, maktabadaha iyo waxyaabo badan.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo cashuuro ah. Tusaale waa cashuurta aad ka bixiso mushahaaradaada marka aad shaqayso. Cashuurtan waxaa lagu magacaabaa cashuurta dakhliga. Cashuurtan si otomaatig ah ayaa looga jaraa mushahaaradaada ka hor intaan mushahaarada lagu siin adiga. Mushahaarada ku soo dhacda xisaabtaada bangiga micnihii waa lacagta aad haysato in aad ku noolaato.
Nidaamka cashuurta ee Iswiidhishka wuxuu ku dhisanyahay in dadka shaqeeya lacag badan ay bixiyaan cashuur dheeraad ah. Waxaynu cashuurta siinaa degmada iyo gobolka aynu ku noolnahay. Cashuurtu way ku kala duwanyihiin degmo kastaba. Badanaaba waxay tahay boqolkiiba 29–35 ka mid ah dakhliga. Kuwa leh dakhliyo ka sareeya heer gaar ah waxay bixiyaan xitaa cashuur la siiyo dawladda.
Hey'adda cashuuraha waa hey'adda dawladeed ee gudaha Iswiidhan mas'uulka ka ah in shakhsiyaadka gaarka ah iyo shirkaduhu bixiyaan cashuur.
Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan caddaynta dakliga waxaad la xiriiri kartaa Hey'adda Cashuuraha. Adigu waxaad u diri kartaa telafoon, ii-mayl ama booqan kartaa xafiis adeeg. Xafiisyada adeegga ayaad ka heli kartaa caawimaada dhinaca su'aalaha kala duwan ee Hey'adda Cashuuraha, Qasnadda Caymiska iyo Hey'adda arrimaha hawl-gabka ay ka shaqeeyaan. Halkaas ayaad ka heli kartaaa hagid iyo talobixin, iyo caawimaada dhinaca foomamka iyo codsiyada.
Akhri dheeraad ku saabsan sida loo sameeyo caddaynta dakhliga kuna qoran Hey’adda Cashuuraha boggeeda intarnatka.
Hey’adda Cashuuraha boggeeda intarnatka waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa caawimaad ah ee aad ka heli karto xafiis adeeg iyo meesha aad ku booqan karto xafiis adeeg.